तरुण दलका अध्यक्षको गोली हानी हत्या ! - तरुण दलका अध्यक्षको गोली हानी हत्या !
तरुण दलका अध्यक्षको गोली हानी हत्या !
२०७५, २४ भदौ, 01:41:39 PM
रोल्पा । रोल्पामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक कार्यकर्ताको आइतबार गोली हानी हत्या भएको छ। नेपाल तरुण दल रोल्पा नगरपालिकाका अध्यक्ष रोहित पुनको सत्तारुढ नेकपा कार्यकर्ताहरुले हत्या गरेको तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही आरोप लगाएका छन् ।
शाही भन्छन्,यो घटनामा नेकपाका कार्यकर्ता देब घर्ती लगायत समूहको हात छ। शाहीले ‘कम्युनिस्ट सरकारको आडमा सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताले कानुन आफ्नो हातमा लिएर आपराधिक र आतंककारी शैलीमा हत्या गरिएको’ भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन्।